बालुवाटारमा देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच भेट
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले (समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले छलफल गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको...
प्रचण्ड सुटुक्क चितवनमा !
चितवन – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड सुटुक्क चितवन आएर काठमाण्डौ फर्कनुभएको छ । अघिपछि प्रचण्ड चितवन आउँदा उहाँको सचिवालयले मात्र होइन जिल्ला तहका नेताले भरतपुर विमानस्थलमा फुलमालाले स्वागत गर्दथे । प्रचण्ड आज चितवन आएको कुरा न हल्ला गरियो न विमानस्थलमा स्वागत । भरतपुर महानगरको मेयरमा सत्ता गठबन्धनबाट छोरी रेनु दहालले उम्मेदवारी दर्ता गराएकै भोलिपल्ट आज बिहान प्रचण्ड चितवन आएर केही समय बसेर फर्कनुभएको थियो । प्रचण्ड भरतपुरको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा चासो राख्दै असन्तुष्ट कांग्रेस ने...
उज्यालो अनलाइन 21 दिन पहिले
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज बिहानै जनकपुर गएका छन् । सहिद रामवृक्ष यादवका सहपाठी सन्तोषी यादवको निधन भएकोमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न प्रचण्ड जनकपुर गएका हुन् । प्रचण्ड गत २ भदौमा यादवको स्मृतिसभालाई सम्बोधन गर्न पनि जनकपुर पुगेका थिए । तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष सुरु नगर्दै २ भदौ २०५१ उनको हत्या भएको थियो । पार्टी केन्द्रीय समितिको आह्वानमा अघिल्लो दिन जनकपुरमा भएको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किने क्रममा उनको
प्रधानमन्त्री देउवा भेट्न प्रचण्ड बालुवाटारमा
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार पुगेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड केही बेरअघि बालुवाटार पुगेका हुन् । अहिले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच एमसीसीको निकासका विषयमा छलफल भैरहेको छ । प्रचण्ड बालुवाटार प्रवेश गरेको केही बेरपछि अर्थमन्त्री एवम् माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् ।
प्रचण्ड कोरोना संक्रमणमुक्त भए
काठमाडौं, २ पुस । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । आइतबार साँझ प्रचण्डको सचिवायलयले उनी कोरोनामुक्त भएको जानकारी दिएको हो । पिसिआर परीक्षणका क्रममा रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै प्रचण्ड कोनामुक्त भएको पुत्री रेणु दाहालले जनाएकी छन् । कोरोना संक्रमण भएसँगै प्रचण्ड घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए ।
प्रचण्ड अस्पतालबाट डिस्चार्ज
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । रक्तचाप बढेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड शनिबार मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएका थिए । डाक्टरहरुको सल्लाहअनुसार एक रात अस्पताल बसेपछि आइतबार प्रचण्ड डिस्चार्ज भएका हुन् । चिकित्सकका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डको स्वास्थ अवस्था सामान्य रहेको छ ।केही दिनअघि विभिन्न जिल्ला भ्रमण गएकाले दौडधुपका कारण उनको रक्तचाप बढेको थियो ।
Ratopati आश्विन २०७८
'यो युगको प्रचण्ड म मात्र हो’
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो युगको प्रचण्ड आफुमात्रै भएको बताएका छन्। एउटै समयमा थुप्रै प्रचण्ड जन्मन नसक्ने उनको भनाइ थियो। शुक्रवार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा पार्टी प्रवेश गराउँदै उनले माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डलाई प्रतिक्रान्तिकारीहरुले सिध्याउन खोजेको भन्दै रक्षा गर्न आग्रह गरे। ‘एउटै युग, कालखण्डमा थुप्रै प्रचण्ड हुनै सक्दैनन्, थुप्रै माक्र्स, लेनिन र माओ हुनै सक्दैनन्।’ उनले भने।
Dekhapadhi आश्विन २०७८
र्‍याफ्टिङ गर्न सुकुटे पुगे प्रचण्ड
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेका छन्। राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहने प्रचण्ड आज मनोरञ्जनको लागि त्यहाँ पुगेको बताइएको छ। प्रचण्ड आज दिउँसो ४ बजे सुकुटे पुगेका हुन्। पत्नी सीता दाहालसहित सुकुटे पुगेका उनले र्‍याफ्टिङ समेत गरेका छन्। प्रचण्डको साथमा माओवादी केन्द्रीय…
पहिलो पोस्ट आश्विन २०७८
राजनीतिक ‘तुवाँलो’ भित्र प्रचण्ड
२४ चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीनदिने रुकुम–रोल्पा भ्रमणमा निस्किएका छन् । २६ चैतसम्म प्रचण्ड उतै रहने भएकाले त्यसअघि राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै ठोस निर्णय हुने सम्भावना न्यून छ । अझ बितेको हप्ताका राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने प्रचण्ड काठमाडौं फर्किएपछि पनि तत्कालै कुनै राजनीतिक उतारचढावको सम्भावना देखिंदैन । किनकि, अहिलेको […]
अनलाइनखबर फाल्गुन २०७७
नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईबीच शुक्रबार साँझ गोप्य भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित बनेको बेला प्रचण्ड र भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको हो । प्रचण्ड नेपाल समूहले जस्तै भट्टराईले पनि ओलीको कदमको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । यही बीचमा दुई नेताबीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । लैनचौरस्थित एक घरमा भएको छलफलमा ओलीको कदमविरुद्धको आन्दोलनमा कार्यगत एकतालगायत पार्टी एकीकरणसम्मको विषयम...
Lokaantar पौष २०७७
सडकमा प्रचण्ड !
नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) ‘प्रचण्ड-नेपाल’ समूहले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आयोजना गरेको विरोधसभामा सहभागी हुन अगाडि ‍यालीमा सहभागि नेकपा अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत नेताहरु । तस्वीर : रोशन सापकोटा-रासस